Harvey Law Group (HLG) offers an exclusive investment opportunity in South East Asia with the launch of Tommie Hotel Hollywood eligible to the US Green Card Program – LYCA COMMUNICATIONS
Harvey Law Group (HLG) offers an exclusive investment opportunity in South East Asia with the launch of Tommie Hotel Hollywood eligible to the US Green Card Program
Date: June 28, 2018Author: Rahul0Comments
Tommie Hotel Hollywood is located next to Hollywood Walk of Fame,aworld’s renown hotspot in downtown Los Angeles
Yangon – June 28, 2018 – A vibrant eight-story full-service boutique hotel has situated itself onto one of America’s busiest tourist district. The brand-new micro-lifestyle development is within walking distance to commercial and leisure destinations such as the Hollywood, Highland Entertainment Center, and Los Angeles nightlife scene. The vibes are relaxing and the energetic community fuels the imagination. Here is Myanmar’s first exclusive insight into Hollywood’s latest real estate development qualified for the EB5 program- Meet Tommie Hotel Hollywood.
Artist impression of Tommie Hotel Hollywood
The 212-rooms Tommie Hotel Hollywood has started construction in Q1 2018, constructed by The Relevant Group, one of L.A.’s largest independent real estate developer, known for their renown developments along the famous Hollywood strip such Thompson Hotel, Tommie Hotel, TAO Group (Hotel & Restaurant), Avenue Club, Beaty & Essex Hollywood, and Dream Hotel. The hotel boastsascenic rooftop pool & lounge,arestaurant, state-of-the-art fitness centre, indoor sauna, and ground-floor retail commercial space equipped with the underground parking garage. The project is expected to create at least 1,127 jobs.
“By investing 500,000 USD in Tommie Hotel Hollywood, investors can expect to receive their US green card and settle anywhere in the US in less than2years to pursue business, financial, and personal opportunities inacountry where politics and the economy may be more stable than their country of origin,” comments Mr Bastien Trelcat, Managing Partner (South-East Asia) for Harvey Law Group.
“This isaunique opportunity to invest inaboutique hotel inaprime location of Hollywood, the entertainment capital of the world,” says Bastien Trelcat who adds “Tommie was among the dozen of EB5 projects Harvey Law Group reviews every year fromalegal and final point of view. We decided to go for Tommie based on the sound business model and the track records of Relevant Group in L.A. which should allow our clients to obtainasafe return and exit of their investment”.
Mr Bastien Trelcat, Managing Partner (South-East Asia) for Harvey Law Group.
“Investors willing to settle to the US under the EB5 Program should consider Tommie Hotel now since the EB5 program at USD 500,000 should end on September 30 this year following which the minimum investment amount is expected to double” finally concludes Mr Trelcat.
HLG was awarded for Best Immigration Firm at the 13th annual Macallan ALB Hong Kong Law Awards 2014 and 2017. For further inquiries on exclusive financing option or investment immigration program opportunities, please visit http://www.harveylawcorporation.com
TOMMIE HOTEL HOLLYWOOD စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အတူ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် Green Card နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရရှိနိုင်မည့် အရှေ့တောင်အာရှတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အရေးကြီးတစ်ခု HARVEY LAW GROUP မှ ဖန်တီးပေးမှု
ရန်ကုန်၊ ဇွန်လ (၂၈)ရက်၊ ၂၀၁၈ခုနှစ် – လှပထည်ဝါသော အရောင်ဒီဇိုင်းများနှင့် အထပ်(၈)ထပ်ပါ ဝန်ဆောင်မှုအပြည့် ရရှိ နိုင်သော ဟိုတယ်တစ်ခုကို အမေရိကနိုင်ငံ၏ ခရီးသွားဧည့်သည်များဖြင့် အစည်ကားဆုံးအပိုင်းတွင် စတင် မိတ်ဆက် ဆောက်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ၎င်း အသစ်စက်စက် လူနေမှုပုံစံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ဟောလိဝုဒ်၊ Highland Entertainment Center တို့သာမက လော့စ်အိန်ဂျလိစ် ညပွဲလမ်းသဘင်များစသော အပန်းဖြေ နားနေရာများမှ လမ်းလျှောက်သွားနိုင်သော အကွာအဝေးအတွင်းတွင် တည်ရှိပါသည်။
ထိုနေရာများသည် စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်း တက်ကြွစေပြီး စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုလည်း ကွန့်မြူးစေပါသည်။ EB5 တွင် အရည် အချင်းပြည့်မီသော ဟောလိဝုဒ်၏ နောက်ဆုံးပေါ် အိမ်ခြံမြေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပုံစံကို မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် Tommie Hotel Hollywood မှ ပထမဦးဆုံး သီးသန့်မိတ်ဆက် ရှင်းပြထားပါသည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တစ်ခွင်ရှိ အထင်ကရ အိမ်ခြံမြေများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသော အရှေ့တောင် အာရှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ ၎င်းတို့၏မိသားစုနှင့် ချစ်ခင်ရသူများအား အမေရိကန်နှင့် ပတ်သက်သော စိတ်ကူးအိပ်မက်များ ဖန်တီးပေးလိုသူများအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော အခွင့်အရေးများ ရှိနေ ပါသည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်းနှင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှ တဆင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ စီးပွားရေးကို မြှင့်တင်ပေးရန်အတွက် EB-5 ၏ ရွှေ့ပြောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အစီ အစဉ်သည် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ အိမ်ထောင်ဖက်များကို စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀,၀၀၀ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ အမေရိကန် နိုင်ငံသားများ အတွက် အတည်တကျ အချိန်ပြည့် အလုပ်အကိုင် (၁၀) ခု ဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် Green Card ရရှိလျှောက် ထားနိုင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။
အခန်းပေါင်း (၂၁၂) ခန်းပါရှိသော Tommie Hotel Hollywood သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပထမလေးလပတ်တွင် Thompson ဟိုတယ်၊ Tommie ဟိုတယ်၊ TAO Group (ဟိုတယ်နှင့် စားသောက်ဆိုင်), Avenue Club, Beaty & Essex Hollywood နှင့် Dream Hotel L.A စသော ဟောလိဝုဒ် နာမည်ကြီး ဟိုတယ်များ ဆောက်လုပ်ဖန်တီးသူအဖြစ် ထင်ရှားပြီး L.A ၏ အကြီးဆုံး ကိုယ်ပိုင် အိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း တစ်ခု ဖြစ်သော The Relevant Group မှ တာဝန်ုယူကာ စတင်ဆောက်လုပ်နေပြီ ဖြစ်သည်။ ၎င်း ဟိုတယ်တွင် ရှုခင်းလှပသော ခေါင်မိုးထက် ရေကူးကန်နှင့် နားနေခန်း၊ အဆင့်မြင့် စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်၊ နောက်ဆုံးပေါ် စက်ကိရိယာများ အစုံအလင်ရှိသော အားကစားခန်းမ၊ ချွေးထုတ်ခန်း၊ အရောင်း ဆိုင်ခန်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွင့်လှစ်နိုင်သော မြေညီထပ်နှင့် မြေအောက် ကားပါကင် စသည်တို့ ပါဝင် ပါသည်။
ဤစီမံကိန်း ပရောဂျက်မှ အနည်းဆုံး အလုပ်အကိုင်ပေါင်း (၁,၁၂၇) ခု ဖန်တီးပေးနိုင်ရန် မျှော်မှန်းထားသည်။“Tommie Hotel Hollywood မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀,၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အမိနိုင်ငံထက် နိုင်ငံရေးနဲ့ စီးပွားရေး အခြေအနေ ပိုမိုတည်ငြိမ်တဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံတွင်း မှာ Green Card ရရှိနိုင်ပြီး (၂)နှစ်အတွင်း မည်သည့်နေရာတွင်မဆို စီးပွားရေး၊ ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို ရရှဖို့ မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ် ”ဟု Harvey Law Group ၏ အရှေ့တောင် အာရှ Managing Partner ဖြစ်သူ Mr. Bastien Trelcat မှပြောကြားခဲ့ပါသည်။Harvey Law Group (HLG) သည် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပိုင်းတွင် အာရှတွင် စွန့်ဦး ဆောင်ရွက်သူ ဖြစ်ပြီး မကြာသေးခင်က အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသ၏ Tommie Hotel Hollywood အတွက် သီးသန့် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေအကြံပေး ကုမ္ပဏီအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
“ကမ္ဘာမှာလူသိများတဲ့ ဖျော်ဖြေရေးစင်တာ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဟောလိဝုဒ်ရဲ့ အထင်ကရ နေရာမှာ တည်ရှိသည့် ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ အခုလို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်ရခြင်းက တကယ့်ကို ကြီးမားတဲ့ အခွင့်အရေး တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Tommie ဆိုတာ ဥပဒေ ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ရှုထောင့်ကနေ နှစ်တိုင်း Harvey Law Group က ပြန်လည်ကြီးကြပ် သုံးသပ်ပေးနေတဲ့ EB5၏ စီမံကိန်းပရောဂျက်ပေါင်း ဒါဇင် ကျော်ထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Relevant Groupရဲ့ L.A မှာရှိတဲ့ စီးပွားရေးမှတ်တမ်းနဲ့ Tommie ရဲ့ ခိုင်မာမှုရှိတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းပုံစံငယ်တို့ကို အခြေခံပြီး ကျွနု်ပ်တို့ရဲ့ ဝယ်ယူသူတွေကို သူတို့ရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ အကျိုးအမြတ်တစ်ခုကို ပြန်လည်ပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ်လို့ ယုံ ကြည်တဲ့အတွက် ဒီ Tommie နဲ့အလုပ်လုပ် ဖြစ်ခဲ့တာပါ” ဟု Mr. Bastien Trelcat မှ ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ Mr. Bastien Trelcat မှပင် “ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကို အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ EB5 အစီအစဉ်ကတဆင့် အခြေချနေထိုင်ဖို့ စိတ်ကူးရှိတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအနေနှင့် Tommie ဟိုတယ်မှာရင်းနှီး မြှုပ်နှံဖို့ အတွက် စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀,၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မယ့် EB5 အစီအစဉ်ကို ယခုနှစ် စက်တင်ဘာလကစပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ပမာဏ(၂)ဆ တက်သွားနိုင်တဲ့အတွက် အမြန်ဆုံး စဉ်းစားဆုံးဖြတ် သင့်ပါတယ်” ဟု တိုက်တွန်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Harvey Law Group (HLG) အကြောင်း
Harvey Law Group(HLG) သည် ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင် ရုံးခန်းပေါင်း (၁၉) ခုကျော်ဖြင့် နာမည် ကျော်ကြားပြီး ထိပ်တန်းဝင်သော လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ကော်ပိုရေးရှင်းများကို ကိုယ်စားပြုရန်အတွက် ကော်ပိုရိတ် ဥပဒေနှင့်ရွှေ့ ပြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စသည့်အပိုင်းများကို အထူးပြုသော ထိပ်တန်း နိုင်ငံပေါင်းစုံဥပဒေ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်ပါ သည်။ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ငံသားများအား တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအကြံပေး ဆောင်ရွက်နေသော ဥပဒေဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ တစ်ခု အနေနှင့် HLG မှ ပြည့်စုံရှင်းလင်းသော နေထိုင်ခွင့်နှင့် နိုင်ငံသား အစီအစဉ်များကို HLG မှ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေပါသည်။
HLG မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး ရွှေ့ပြောင်း ကုမ္ပဏီ အဖြစ် (၁၃) ကြိမ်မြောက် Macallan ALB ဟောင်ကောင်ဥပဒေဆု ပေးပွဲတွင် ရရှိခဲ့သည်။သီးသန့်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများ (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ် အခွင့်အရေးများ အကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက HLG World Wide ၏ Managing Partner ဖြစ်သူ Mr. Jean-François Harvey (jfharvey@harveylawcorporation.com) နှင့် HLG Managing Partner ဖြစ်သူ Bastien Trelcat (btrelcat@harveylawcorporation.com) တို့ထံတွင် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်လိုပါက ဖုန်းနံပါတ် 959400534007 သို့မဟုတ် http://www.harveylawcorporation.com ဝက်ဘ်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် Facebook Page https://www.facebook.com/HLGmyanmar/ မှတဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Previous Previous post: Harvey Law Group appointed as official Southeast Asia’s representative firm for Range Development’s latest branded pool villa resort expansion
Next Next post: Suzuki Myanmar ties up with AYA Bank to offer7years auto loan program for prospective customers